पुष्पा’की २५ वर्षीया अभिनेत्री रश्मिका आखिर ४७ वर्षीय २ सन्तानका बाबु सँग किन परिन् प्रेममा, को हुन् उनी ? – OSNepal
पुष्पा’की २५ वर्षीया अभिनेत्री रश्मिका आखिर ४७ वर्षीय २ सन्तानका बाबु सँग किन परिन् प्रेममा, को हुन् उनी ?
दक्षिण भारतीय चलचित्रकी चर्चित नायिका रश्मिका मन्डन्नाले छोटो समयमा नै देशव्यापी रुपमा आफ्नो नाम कमाएकी छिन् । उनको सुन्दरता र अभिनयको पनि हिन्दी क्षेत्रका दर्शकमाझ चर्चा चुलिएको छ । यतिबेला रश्मिका फिल्म ‘पुष्पाः द राइज’बाट ठूलो पर्दामा चर्चामा छिन् । यो फिल्ममा उनी सुपरस्टार अल्लु अर्जुनको अपोजिटमा देखिएकी छिन् ।
अभिनयसँगै रश्मिका मन्डन्नाले आफ्नो सौन्दर्य र क्यूटनेसको आधारमा पनि करोडौं फ्यान बनाएकी छिन् । लाखौं र करोडौं मानिसहरू रश्मिकाको क्रेजी फ्यान बनेका छन् । तर उनि भने अर्कै एक नायक संग पागल जस्तै भएर पछि परेकी छिन् । रश्मिकाले मन पराउने कलाकार सुपरस्टार दुई सन्तानका पिता हुन् । ति अभिनेता हुन् मास्टर फेम थालापथी विजय ।
थालापथी विजय पनि लोकप्रिय अभिनेता हुन्। उनले धेरै फिल्ममा काम गरिसकेका छन् र दक्षिण भारतीय सिनेमामा पनि उनको राम्रो पकड छ। रश्मिकाले आफ्नो एउटा फिल्मको प्रमोशनका क्रममा आफूलाई विजय मन पर्ने बताएकी थिइन् । ध्यान दिन लायक छ कि आफ्नो एक अन्तर्वार्ताको क्रममा रश्मिका मन्डनाले बताइन् कि उनी एक तमिल स्टारसँग क्रश छिन् जससँग उनी पर्दामा आउन चाहन्छिन् र त्यो हुन् अभिनेता थालापथी विजय।
यो कुरा अभिनेत्रीले आफ्नो फिल्म भीष्मको प्रमोशनका क्रममा खुलासा गरेकी हुन् । तर, हामी तपाईंलाई बताउन चाहन्छौं कि रश्मिकाको क्रश थालपथी विजयमा छ, यद्यपि उनी आजकल चर्चित अभिनेता विजय देवरकोन्डासँग झगडा गरिरहेकी छिन । यद्यपि दुबै अभिनेताले आफ्नो सम्बन्धको बारेमा कहिल्यै केही भनेका छैनन्। रश्मिका र विजय देवरकोंडाको जोडी पनि ठूलो पर्दामा देखा परेको छ । मुम्बईको एक रेष्टुरेन्टमा पनि दुबै कलाकार सँगै देखिएका थिए ।
तर, दुवैले आफ्नो सम्बन्धको बारेमा केही पनि बोलेनन् । रश्मिकाले सामाजिक सञ्जालमा पनि कडा फ्यान फलोइङ बनाएकी छिन् । अभिनेत्रीलाई इन्स्टाग्राममा २६।८ मिलियन ९२६।८० मिलियन भन्दा बढीले फलो गरेका छन् । रश्मिकाको वर्कफ्रन्टको कुरा गर्ने हो भने उनको हालैको फिल्म ‘पुष्पा’ ले विश्वभर ३ सय करोड बढी कमाएको छ ।